ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းလောကီသားတို့သည်ယခုအချိန်တွင်ပူဇော်နိုင်သောအပူဆုံးဂိမ်းတစ်ခုစုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်တို့ဆီသို့လာမယ့်နေကြသည်။ ဒီယေဘုယျဆိုဒ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးနည်းနည်းရှိပါတယ်။ သငျသညျဂိမ်း၏ဤကြီးမားသောစုဆောင်းမှုကိုကြည့်ရှုစတင်ပါလျှင်သင်မျက်တောင်ခတ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးမဆိုကြင်နာဘို့စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ့လိမ့်မည်။ ဒီဆိုဒ်ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပေါ်ရောက်တဲ့သူတိုင်းနှစ်သက်မယ့်စုဆောင်းမှုတစ်ခုကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာသိသွားပါပြီ။ ဒီစုဆောင်းမှု၏ဂိမ်းများကိုသာညစ်ညမ်းဂိမ်း၏မျိုးဆက်သစ်ကနေဖြစ်ကြသည်။, သင်သာအမြင်တစ်ခုနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အနေဖြင့်သင်လိုအပ်သမျှနှင့်အတူလာမယ့်သောငါတို့ဆိုက်ပေါ်တွင်ခေါင်းစဉ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကပိုမိုကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်များနှင့်တိုးမြှင့်ထားသောရွေ့လျားမှုအင်ဂျင်များကိုယူဆောင်လာသည်၊သူတို့သည်လိင်ကိုပိုမိုလက်တွေ့ကျစေပြီးသင်၏စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများကိုထားလိမ့်မည်၊အရာအားလုံးသည်သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သင်တို့သည်ငါတို့၏ဂိမ်းကစားရန်အသုံးပြုသောအရာကိုကိရိယာပေါ်တွင်အရေးမထားဘူး။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ထွက်ရှိအဓိကဘရောက်ဇာ၏တဦးတည်းပြေးနိုင်သကဲ့သို့,သင်သည်ဤဂိမ်းများကိုပြေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှမိုဘိုင်းဂိမ်းအမှတ်ပေါ်ကြောင်းသေချာအောင်အန်းဒရွိုက်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်သူတို့ကိုစမ်းသပ်ပြီး.
အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားအပေါ်အရာအားလုံးအခမဲ့သင်တို့ဆီသို့လာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်မှဝင်ရောက်ခွင့်မှတ်ပုံတင်မဆိုပုံစံမလိုအပ်ပါဘူးနှငျ့သငျကြှနျုပျတို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုကစားရှေ့တော်၌သင်တို့၏ဒေတာငါးတက်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုပူးပေါင်းမှကြွလာသောသူမည်သူမဆိုမှရရှိနိုင်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သင်လိုအပ်သမျှကဒီမှာကျနော်တို့စကားများထဲသို့သွင်းထားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးပိုအတူလာ။ သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အရှိစုဆောင်းမှုဖော်ပြကြိုးစားကြကုန်အံ့။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဂိမ်းတွေနဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့ကျေနပ်ဖို့လာသောသူအပေါင်းတို့သည်ကစားသမားမှစွဲလမ်းဖြစ်လူသိများသည်။ သငျသညျမကြာမီမဆိုညစ်ညမ်းပြွန်အကြောင်းကိုမေ့လျော့ခြင်းနှင့်သာသင့်ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးပုံစံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုရလိမ့်မည်။ သငျသညျကစားရန်အမှုအရာထဲကပြေးသည်အထိဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ဆိုက်အသစ်ကဂိမ်းရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ထဲကတချို့ကထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောပြန်ကန်တန်ဖိုးကိုရှိသည်။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်း၏အပေါငျးတို့သအဓိကအမျိုးအစားများနှင့်အတူလာအပေါင်းတို့နှင့်တကွသင်နှစ်သက်ချင်အံ့သောငှါလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွ။ ငါတို့သည်လည်းကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာသင်ပျော်ရွှင်စေရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းစတိုင်နှင့်အတူအသီးအသီးကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနှင့်အတူလာကြ၏။
တကယ်လို့လိင်အဂါၤကဘာနဲ့မှယှဉ်လို့မရတဲ့လိင်အဂါင်္ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့လိင်အဂါင်္ကိုကစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လိင်ဆိုင်ရာဂိမ်းများတွင်သင်ဇာတ်ကောင်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပြီးသင်လိုချင်သည့်သို့သော်သူတို့ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ အဆိုပါဂိမ်းကိုသင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာစိတ်ကူးယဉ်နှစ်သက်ချင်တဲ့အခါသင်ကစားချင်သူများဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျအများနှင့်မစ်ရှင်ဖြည့်စွက်နိုင်သည့်အတွက်ဇာတ်ကောင်အပြန်အလှန်နှင့်ပင်ဂိမ်းကစားပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းကစားတဲ့အခါဇာတ်လမ်းကိုသာဂရုစိုက်တဲ့သူတွေအတွက်စာသားအခြေပြုဂိမ်းတွေ၊ဂိမ်းကစားချိန်ပျံသန်းချင်သူတွေအတွက်ကာစီနိုဒါမှမဟုတ်ပဟေဠိဂိမ်းတွေကိုတောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
ဒါဟာငါတို့ရှိသမျှသည်ဝဘ်ကျော်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားနှင့်အတူဤမျှလူကြိုက်များစေသည်သောဂိမ်းမသာပါပဲ။ အြန္လိုင္းမွာေပ်ာ္ရႊင္စရာအခ်ိန္ေတြလိုအပ္သမွ်နဲ႔ လာေနတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကျနော်တို့ကြည့်ရှုကိရိယာများနှင့်ကောင်းစွာစနစ်တကျစာကြည့်တိုက်ကိုဆက်ကပ်,ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခြားကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်စေရန်အချို့သောအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များကိုဆက်ကပ်,ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆာဗာများ,နှင့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာက,ကျနော်တို့လုံးဝလုံခြုံပြီးညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်. ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအခမဲ့သင်တို့ထံသို့လာကြ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆိုက္မွာေၾကာ္ျငာေတြေၾကာ္ျငာေတြ ႐ိုက္ေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆိုက္မွာေၾကာ္ျငာေတြ ႐ိုက္လို႔ရေအာင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနပါတယ္။, ငါတို့သည်သင်တို့အပေါ်ပေါ့ပ်တက်တွန်းအားပေးဘယ်တော့မှလိမ့်မည်,သင်သည်အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သင်ကျော်သွားသို့မဟုတ်ပြန်ညွှန်းလို့မရဘူးဗီဒီယိုကြော်ငြာတွေကိုကြည့်ရှုစေပါ. အရာအားလုံးသင်နှင့်ငါတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်အခမဲ့နှင့်တရားမျှတပါ!